Miziriziry ny UCTU : 500 Ar ihany ny saran-dalan’ny taxi-be | NewsMada
Miziriziry ny UCTU : 500 Ar ihany ny saran-dalan’ny taxi-be
Par Taratra sur 15/02/2017
Miziriziry ny Fikambanan’ny koperativa fitaterana an-dRenivohitra(UCTU): 500 Ar ny saran-dalana amin’ny taxi-be. “Nilaza ny talen’ny jeneralin’ny ATT fa nifanaraka taminy izahay tato amin’ny UCTU, indrindra izahay nasainy ho tonga tany aminy. Nilaza fa hoe nifanaraka ireo mpitatitra eto Antananarivo ao anatin’ny UCTU sy ny ATT fa hijanona 400 Ar io saran-dalana io. Milaza izahay fa tsy nisy resaka an’izany hoe nifanaraka izany.”
Tenin’ny filohan’ny Fikambanan’ny koperativa fitaterana an-dRenivohitra(UCTU), Andriambinintsolomora Bernardin, tamin’ny mpanao gazety, teny Ambodivona, omaly, io.
“Mbola manamafy izahay eto, tomponandraikitry ny fitaterana sy filoha koperativa, eto Antananarivo avokoa: tsy mihemotra amin’ny saran-dalana izay efa tapaky ny besinimaro. Ny 500 Ar izany”, hoy izy. Na izany aza, misy tapa-dalana, raha akaiky…
Miaka-bidy ny menaka, ny saran’ny Jirama, ny vary… Maninona no tsy misy fanelanelana avy amin’ny manampahefana be toy izao atao amin’ny fiakaran’ny saran-dalana izao? Ny saran-dalana no mba miakatra kely 100 Ar, korontanina ny firaisankinan-dry zareo sy ny fitaterana.
Tsy manantena fanampiana ara-bola ny mpitatitra
“Fanakorontanana anay io fanampiana ara-bola io. Ireo namanay ireo, mihevitra sy mbola manantena amin’izao fotoana izao ny fanampiana ara-bola”, hoy ihany ny filohan’ny UCTU. Misy mbola tsy azo ny tamin’ny 2015 amin’izany: mbola be ny tsy nahazo. Ny 2016 raha misy: volana novambra sy desambra ihany no nahazoana. Vitsy kely no mbola nahazo. Mbola hiara-midinika koa ny vola fanampiana fa nihena be.
Efa niakatra ny saran-dalana, ny 4 oktobra 2016. Nangataka ny fitondram-panjakana mba hanemorana azy fa misy raharaham-pirenena: ny Frankofonia. Nilaza ho tsy manakana ny fampiakarana ny fanjakana, fa mangataka ny hanemorana izany aloha. Momba ny tsy fanarahan-dalana, efa nangataka ny Emmo/Reg ry zareo tamin’izany mba hitandroana ny fandriampahalemana.
Ny vahoaka no mitondra faisana
Iza no mandainga: ny ATT sa ny UCTU? Ny vahoaka no mitondra faisana amin’ny saran-dalana 500 Ar ihany. Na homena fanampiana aza izay manondrotra saran-dalana, tsy mamaha ny fahasahiranam-bahoaka ny famaizan’ny fanjakana. Fantatra fa any amin’ny 60% amin’ireo mpitatitra no hampiakatra saran-dalana 500 Ar izay. Ho aiza ny vahoaka? Mila vahaolana, dieny tsy mbola mipoaka ny sarom-bilany…